समाचार – Page2– Tesro Ankha
तेस्रो आँखा संवाददाता बस्नेतगाउँ (हलेसी) । हलेसीको बस्नेतगाउँ–दुङ्देलो सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । सडक निर्माणका लागि विनियोजित आठ लाख रुपैयाँले आधा काम सम्पन्न भएको युवा नेता सर्वधन बस्नेतले जानकारी गराए । ‘निर्माणाधीन सडक सम्पन्न हुँदा २५ घर प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्,’ नेता बस्नेतले भने, ‘तर, हलेसी आइपुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यही भएर मञ...
अनुशासित बनाउन ‘मिडिया’ चइन्द्र राई वडाध्यक्ष, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान सुरु–सुरुमा तुवाचुङ साप्ताहिक पठनीय लाग्दैनथ्यो । बिस्तारै खोजी–खोजी पढ्नेखालको बन्यो । समाजको ऐना बनोस् भनेर पूर्ववक्ताहरूले तुवाचुङ साप्ताहिक परिवारलाई शुभकामना दिइसक्नुभएको छ । मेरो पनि थुप्रै शुभकामना । समाजमा भए/गरेका राम्रा नराम्रा गतिविधिलाई पत्रिकाले समाचार बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गरिरहेकै छ ।...
हलेसी (खोटाङ) । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई आधारभूमि बनाएर खोटाङबाट प्रकाशित तुवाचुङ साप्ताहिकले प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर चार विधामा ६ जनालाई ‘तुवाचुङ साप्ताहिक पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ । पत्रकारिता, समाजसेवा, साहित्य र खेलकुद विधामा पुरस्कृत हुनेमध्ये खोटाङलाई आधारभूमि बनाएर पत्रकारिता गर्दै आएका तीन पत्रकार रहेका छन् । तीन पत्रकारमध्ये दमन राई, केदार मगर र उत्तम चौलागाईं हुन् । राई न...
केदार मगर खोटाङ । रावाबेंसी गाउँपालिकाको दुई वडाका किसानले लिची बेचेर दुई करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । रावाबेंसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डे र रावाबेंसी गाउँपालिका–२ खार्पाका किसानले यस वर्ष लिची बेचेर दुई करोड भन्दा बढी आम्दानी गरेका हुन् । कुभिन्डे र खार्पाका किसानले उत्पादन गरेको लिची जिल्लाबाहिरसमेत निर्यात भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कुभिन्डे र खार्पामा यस वर्ष १ हजार ४८७ मेट्रिक टनभन...
नवीन चाम्लिङ राई सुन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, जहाँ एउटा ढुंगाले इतिहास बोकेको छ । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म खामाही ढुंगाको महत्व उत्तिकै छ । चाम्लिङ राई भाषामा खामाहीको अर्थ हुन्छ–तिम्रो रगत । परम्परागत मान्यताअनुसार यो किराती पुर्खाको चिनो हो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ ऐंसेलुखर्कमा खामाही ढुंगा रहेको छ । स्थानीय छेम्मा कोकु (हजुरआमा) ले मर्ने बेलामा यो ढुंगा तिमीहरूको पुर्खाको रगत हो...
भुटानी राजाकी जेठी महारानीद्वारा हलेसीमा पूजाआजा
टिवन राई हलेसी (खोटाङ) । भुटानी राजा जिग्मेसिङ्घे वाङ्चुककी जेठी रानी आसी दोर्जे वाङ्मो वाङ्चुकले हलेसीमा विशेष पूजाआजा गरेकी छन् । लुम्बिनी भ्रमण पूरा गरी गत सोमबार हलेसी आइपुगेकी रानीले मंगलबार पूजाआजापछि हलेसी गुफा, पार्वतीथान, बसाहा गुफालगायत अवलोकन गरेकी थिइन् । महारानी आसीसहित राजकुमारी सोनम डक्चन वाङ्चुक, राजकुमारीका छोरा जिग्मे सिङ्घे वाङ्चुक, नवाङ जिग्मे वाङ्चुकलगायत २३ स...
काठमाडौँ । नेपालले कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारका सन्ततिको शैक्षिक भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली विद्यालय स्थापनाका लागि सहयोग गर्न कतारसँग आग्रह गरेको छ । कतारका लागि नेपालका राजदूत प्रा. रमेशप्रसाद कोइराला र कतारका शिक्षा तथा उच्च शिक्षामन्त्री डा. महम्मद अब्दुल वाहेद अल हमादीबीच सम्पन्न भेटमा कतारस्थित नेपाली नागरिकका सन्ततिको भर्नासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले जना...
तेस्रो आँखा डटकम संस्थापक सहसम्पादक राईको बिदाइ
काठमाडौं । तेस्रो आँखा डटकम संस्थापक सहसम्पादक राजु राईलाई बिदाइ गरिएको छ । तेस्रो आँखा डटकम सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते काठमाडौंमा बसेको बैठकले राईलाई बिदाइ गरेको हो । संस्थापक सहसम्पादक राईले तेस्रो आँखा डटकमलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै बैठकले विशेष धन्दवाद ज्ञापन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीक्रममा कोरियामा रहेका उनले विभिन्न विधामा कलम च...
तेस्रो आँखा डटकम संस्थापक सम्पादक यक्सोको बिदाइ
काठमाडौं । तेस्रो आँखा डटकम संस्थापक सम्पादक सुरेश यक्सोलाई बिदाइ गरिएको छ । तेस्रो आँखा डटकम सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते काठमाडौंमा बसेको बैठकले यक्सोलाई बिदाइ गरेको हो । संस्थापक सम्पादक यक्सोले तेस्रो आँखा डटकमलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै बैठकले विशेष धन्दवाद ज्ञापन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीक्रममा हङकङमा रहेका उनले साहित्यका विभिन्न व...
अनिल किराती धनबहादुर देउवा । देउवाले चार भैंसी पालेका छन् । ‘स्पेसल’ खीर बेच्छन् । पानी नहालेको दूधको चियासमेत बेच्छन् । उनको पसलबाट खुवा, कुराउनी, पुष्टकारी, पेडा किन्नेको सानोतिनो भीडभाड नै लाग्छ । पसलको नाम : बाजेको खीर पसल । स्थान : साहुखर्क, डडेल्धुरा । बाजे (धनबहादुर) ले हुक्का तान्दै गर्दा सामान्य कुराकानी भयो । सेल्फी खिच्न आग्रह गरियो । सजिलै माने । चिया पिइयो । पु...